रेड पान्डाको विचरण-विमर्श
सुन्दर जीव रेड पान्डा लोप हुन नदिने हो भने यसको वासस्थान संरक्षणमा तत्काल पहलकदमी जरुरी भइसकेको छ।
घरआँगनकै वनस्पति नदेख्ने अनुसन्धान
'कल्ला लिली' र 'आइरिस जापोनिका' नेपालमा पाइने कुरा आधिकारिक अभिलेखमा भेटिंदैन। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा रहेका यी वनस्पतिबारे विज्ञहरू अहिलेसम्म बेखबर हुनु विडम्बना हो।
सुनसरी र झापामा भेटिएको ‘व्यापारी’ रूख कस्तो वनस्पति? वैज्ञानिक नाम ‘टेरिगोटा एलाटा’ रहेको व्यापारी भनिने रूख नेपालमा सूचीकृत हुनै बाँकी छ। औषधीय गुणयुक्त यो वनस्पतिबारे हामीकहाँ अध्ययन पनि जरुरी छ।
सिक्किमेली वनस्पतिको नेपाल नाता नेपालमा पाइने अधिकांश जीव सिक्किममा पाइन्छन्। यसको कारण हो, सिक्किम र नेपालको सिमाना जोडिएको छँदै छ, भौगोलिक विषमता पनि उस्तै छ।
टौदहमा पहिलो पटक झुल्किएको स्मिउ टौदहमा देखिएको पोथी स्मिउ साइबेरियाबाट यूरोप वा दक्षिणपूर्वी एशियातर्फ लागेको आफ्नो झुन्डबाट छुटेपछि कमन टिल, कमन पोचार्ड, फेरुगिनस डकसँग मिसिएर यता आइपुगेको हुन सक्छ।
झापाको जलथलमा भेटियो दुर्लभ रुख प्रजाति झापाको जलथल जंगलस्थित सामुदायिक वनका संरक्षण कार्यमा सहभागी हुन मित्र लिलानाथ शर्मा शुक्रबार बिहान त्यहाँ पुगेका रहेछन्। शनिबार बिहान सात बजे हल्दीबारीस्थित बडाबारी चोकको एक चिया पसलबाट उनले फोन गरे।
स्थाननामबाट वनस्पतिको न्वारन नेपालमा हिमाल, पहाड, खोला, ठाउँ विशेष आदिको नामबाट फूल फुल्ने १०३ वटा वनस्पतिका नाम राखिएका छन् । तर, यस्तो नामकरण र महत्त्वबारे सम्बद्ध पक्षहरू नै बेखबर छन् ।
जैविक विविधता: नेपालको अर्काे सौम्य शक्ति विविध भूबनोट, दुर्लभ जीव र वनस्पति प्रजाति रहेको नेपालको जैविक विविधताले विश्वकै निम्ति महत्त्वपूर्ण सम्पदाको आकर्षण बोकेको छ।
पूर्वी तराईमा फैलँदै खतरनाक घोप्टे काँडा स्थानीय जैविक विविधतालाई विस्थापित गर्ने वनस्पतिलाई मिचाहा, अतिक्रमणकारी र विनाशकारी प्रजाति भनिन्छ। तर, पूर्वी तराईमा फैलँदै गरेको लज्जावती जस्तो देखिने घोप्टे काँडा मिचाहा मात्र नभई गाईवस्तुकै निम्ति पनि खतरनाक रहेको छ।
अनुसन्धानमा छुटाइएको वन फर्सी हाम्रा अधिकांश वनस्पतिविद्ले विभिन्न जातजातिले प्रयोग गर्ने औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिबारे अनुसन्धान गरेका छन्। तर, वन फर्सीबारे अनुसन्धान गरेको नपाइनु चाहिं अचम्म हो।
वनस्पतिको नाममा बाँच्नेहरू
जैविक विविधताको अनुसन्धान, पहिचान र संरक्षणसँग सम्बद्ध नेपालीहरूको नाममा राखिएको वनस्पतिको वैज्ञानिक नामले उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा अमर बनाएको छ।
कसरी हुन्छ महबाट वनस्पति अध्ययन?
महमा कुन कुन वनस्पतिका परागकण छन्, के कस्ता रसायन छन् र त्यो कुन भूगोलको हो भन्ने विषयमा गरिने अध्ययनले ठाउँविशेषमा कुन कुन वनस्पति प्रजाति छन् भन्ने पनि थाहा हुन्छ।
नेपालमा भेटियो विश्वकै नयाँ ऐंसेलु प्रजाति
शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट संकलन गरिएको ऐंसेलुको प्रजाति विश्वकै निम्ति नयाँ भएको पहिचान भएको छ।
कसरी जोगाउने जलथल जंगल ? प्रदेश १ सरकारले झापाको जलथल जंगल भएर सडक निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ, जुन जैविक विविधतायुक्त वनको संरक्षणमा चिन्ताको कुरा त हो नै, प्रचलित कानूनको प्रतिकूल पनि छ।
नेपालका रेड पान्डा अमेरिका र युरोपका चिडियाखानामा, लाभांशबारे सरकार बेखबर अमेरिका र युरोपका कतिपय चिडियाखानामा नेपालबाट लगिएका रेड पान्डा (हाब्रे) राखिएका छन्। जैविक विविधता महासन्धि विपरीत उनीहरूले ती रेड पान्डालाई आम्दानीको स्रोत बनाएका छन्। तर, नेपालले ‘रोयल्टी’का लागि पहलै गरेको छैन।
जानकारी पाएको १७२ वर्षपछि भेटियो फिसटेल होया जोसेफ डाल्टन हुकरले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सन् १८४८ मै तमोर नदी आसपासबाट फिसटेल होयाको नमूना संकलन गरेको उल्लेख गरेका थिए। घरभित्रको सजावटमा प्रयोग गर्न सकिने यो वनस्पति १७२ वर्षपछि काठमाडौ‌ंमा फेला परेको छ।